Farmaajo: “Waan wadaynaaa howgalada lagula dagaalamayo Shabaab” | raascasayrmedia.com
← Talyaaniga oo Markab dagaal u soo diray xeebaha Soomaaliya
Faahin faahin kasoo baxaysa dagaal ka dhacay Muqdisho →
March 4, 2011 · 11:16 pm
Farmaajo: “Waan wadaynaaa howgalada lagula dagaalamayo Shabaab”
Ra’iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay wadayaan howlgalada ay kula dagaalamayaan Xarakada Al Shabaab isagoo dhinaca kale baaq u diray shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda KMG Max’ed C/laahi Max’ed (Farmaajo) oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in uu sii soconayo howlgalada ka dhanka ah Xarakada Al Shabaab ee maalmihii u dambeeyay ka dhacayay magaalada Muqqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya.
Max’ed C/laahi Max’ed ayaa waxaa uu sheegay in ciidamada qalabka sida ee dowladda ay xilli waliba diyaar u yihiin dagaalada ay kula jiraan Al Shabaab iyo sidii guud ahaan looga ciribtiri lahaa guud ahaan dalka Soomaaliya kooxo uu ku tilmaamay inay hortagaanyihiin nabadda Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda ayaa waxaa uu sidoo kale baaq u jeediyay shacabka Soomaaliyeed oo uu ku booriyay inay taageeraan howlgalada dowladda islamarkaana ay kasoo horjeystaan Xarakada Al Shabaab ee diidan jiritaan dowladda KM Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay.
Max’ed C/laahi Max’ed Farmaajo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa uu cadeeyay inay ogyihiin dhalinyaro laga keenay gobolada dalka kuwaasi oo la doonayo inay ka qeyb qaataan dagaalada ka soconaya magaaalada Muqdisho, isagoo ugu baaqay dhalintaasi inay isku soo dhiibaan dowladda.
Dowladda ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa ay dagaalo kula jirtay Xarakada Al Shabaab taasi oo ay kula wareegaan fariisimooyin ay ku suganaayeen Shabaab iyadoo Mas’uuliyiinta dowladda ay daaha ka rogeen inayka go’antahay inay dalka ka saaraan Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab.